प्रतिस्पर्धी रवि वडले 'नेपाल आइडल-२' को यात्रा पूरा गर्न सक्लान् ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रतिस्पर्धी रवि वडले ‘नेपाल आइडल-२’ को यात्रा पूरा गर्न सक्लान् ?
लोकेश धामी, काठमाडौं । नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिमबाट एकमात्र प्रतिस्पर्धी रहेका रवि वडलाई कसरी गर्ने भोट ? यो प्रश्नको जवाफबारे धेरैलाई थाहा नहोला । त्यसकारण हामी जानकारी गराउँदै छौं । सबैभन्दा पहिले मोबाइलको म्यासेज बक्समा जानुहोस्, अनि १० नम्बर टाइप गरि ३१००९ मा पठाउनुहोस् ।
भोट गर्न बिहीबार साँझ ८ः३० देखि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म गर्न सकिने छ । भोट नमस्ते, स्काई, एनसिएल, स्मार्ट तथा जुनसुकै सिमबाट पनि गर्न सकिने छ । केही महिनादेखि नेपालको एक ठूलो ‘गायन रियालीट शो’ नेपाल आइडल सिजन-२ प्रसारण भइरहेको छ । सिजन-२ मा पनि थुप्रै मिहिनेती प्रतिस्पर्धी छन् ।
उनीहरुबीच अहिले प्रतिस्पर्धाको रौनक झन बढेको छ । कठिन प्रतिस्पर्धाबीच मैदानमा छन्, प्रदेश ७ बाट मिठो आवाज भएका रवि वड ।उनी नेपाल आइडलमा अब प्रदेश ७ बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने एकमात्र प्रतिस्पर्धी हुन् । रविको आवाजमा जादू छ । त्यसकारण त उनी आइडलमै छन् । रविको आवाजको जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ ।
हालको प्रदेश सात (साविक सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र) बाट पनि आइडलको उपाधि जित्ने सम्भावना भएका थुप्रै प्रतिस्पर्धी थिए । तर, उपाधिका जित्ने दौडमा रहेका सम्भावित प्रतिस्पर्धी आउट भएका छन् । यद्यपि रवि भने अहिलेसम्म घर फिर्ता हुनबाट जोगिएका छन् ।
रविले आफ्नो संगीत यात्रा शुरुवात धनगढीस्थित एक दोहोरी साँझबाट गरेका हुन् । आर्थिक स्थिती कमजोर भएको परिवारमा जन्म लिएका उनले आफ्नो बाजेको प्रेरणाबाट गीत संगीतमा लागेको सुनाउँछन् । रविले सांगीतक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रेरणाबारे भने, ‘हजुरबुबा गीत गाउनुहुन्थ्यो विशेष गरि म यो क्षेत्रमा आउन उहाँबाट नै प्रभावित भए ।’
यस्तै, लोकदोहोरी, पप, हिन्दी गीत त उनले सजिलै गाउन सक्छन् । विशेष गरि उनले शिव परियार, सुगम पोख्रेल र हेमन्त रानाका गीतहरु गुन गुनाउँछन् ।रबिले ‘पियानो राउण्ड’ पूरा गरिसकेका छन् । उनी अहिले ‘उत्कृष्ट १२’ भित्र पर्न सफल भएका छन् । रबिले धनगढी अडिसनबाट भाग लिएका हुन् । उनने पहिलो चरणमा कमल खत्रीको ‘अब जाउँला रेलैमा, माया तिम्रो साथैमा’ बोलको गीत गाएर ‘गोल्डेन टिकट’ पाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस ‘नेपाल आइडल–२’ को अडिसनको कहिले ताेकियो ?
त्यसपछि उनले ग्रुपमा ‘पार्यो भुतुक्कै’, थिएटर राउण्ड पूरा गर्दा सुगम पोखरेलको ‘झिल्केले जाल बुन्यो’ बोलको गीतले साथ दियो । र गाला राउण्डमा पुर्याउन ‘फेवा तालमा साइली’ र ‘तिमि रोएको पल’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । गायक वडको पुख्र्यौली घर अछाम हो । उनको उनको यात्रा झन कठिन बनेको छ । आगामी यात्रा उनले बढि मिहिनेत गर्न जरुरी छ । किनकी अब कोहीभन्दा कम प्रतिस्पर्धी छैनन् ।
अब रवि झन कठिन मोडमा पुगेका छन् । कठिन यस अर्थमा कि आगामी चरणमा भोटिङबाट अगाडि बढ्ने हो । यसकारण उनको यात्राबारे यसै भन्न गाह्रो छ। तर, यथार्थ यो होकि रविले आइडलको उपाधि जित्न निकै मुस्कील छ । अझ भनौं सयमा दश प्रतिशत मात्रै । कसरी भन्ने पश्न आउँछ ।
यसको सरल जवाफ छ भोटिङमा सुपका अधिकांश बासिन्दा ज्ञानी छैनन् । र, हौसल पनि जति अरु ठाउँको हुन्छ त्यतित्यहाँबाट हुन्न । यसको ज्वलन्त उदाहरण गएको संस्करणमा पनि हेर्न सक्छौं सन्ध्या जोशीले पर्याप्त भोट नपाएरै उत्कृष्ट पाँचसम्म पनि पुग्न सकिनन् । उनी टप-९ बाटै घर फिर्ता भएकी थिइन्।
याे पनि पढ्नुस विश्वमै सबैभन्दा बढी मन पराइने कार्यक्रममा नेपाल आइडल दोस्रो (भिडियोसहित)
हुन त आफूमा राम्रो प्रस्तुति भयो र दर्शक स्रोताको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्यो भने न क्षेत्रियता चाहिन्छ नत जातियता । त्यसकारण रवि पनि दमदार तवरबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
अब हेर्दै जाउ रविको नेपाल आइडल यात्रा कहाँसम्म पुग्छ ? आशा गरौं उनले नै आइडलको उपाधि जित्न सफल हुन् । रविलाई हाम्रो धेरै शुभकामना !
ट्याग्स: Nepal idol-2